सबैभन्दा ठूलो चट्याङको विश्वरेकर्ड ! ७०९ किलोमिटर लामो, १६ सेकेण्डसम्म चम्किरह्यो – Jagaran Nepal
सबैभन्दा ठूलो चट्याङको विश्वरेकर्ड ! ७०९ किलोमिटर लामो, १६ सेकेण्डसम्म चम्किरह्यो
काठमाडौं। सबैभन्दा लामो दूरीको आकाशीय बिजुली अर्थात चट्याङ र सबैभन्दा लामो समयसम्म चम्किरहेको चट्याङको विश्वरेकर्ड दर्ता भएको छ । सबैभन्दा लामो दूरीको चट्याङ ७०९ किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो भने सबैभन्दा धेरै समयसम्म चम्किरहेको चट्याङ १६.७३ सेकेण्डसम्म चम्किरहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेशन (डब्लुएमओ)ले विश्वरेकर्ड आधिकारिक रुपमा दर्ता गरेको हो ।
सबैभन्दा लामो चट्याङले ब्राजिललाई बीचबाट उत्तर दक्षिण दुई भागमा बाँडेको थियो । सबैभन्दा धेरै समयसम्म चम्किएको चट्याङ अर्जेन्टिनामा रेकर्ड गरिएको थियो । यी दुवै पुराना रेकर्डभन्दा दोब्बर छन् । यसअघि यस्ता चट्याङको रेकर्ड अमभेरिका र फ्रान्समा बनेको थियो । यस बारेमा अमेरिकन जियोफिजिकल युनियनको रिसर्च लेटरमा जानकारी प्रकाशित गरिएको छ ।
डब्लुएमओका विशेषज्ञले २ वर्ष पहिले दक्षिणी ब्राजिलमाथि ३१ अक्टोबर २०१८ मा चम्किएको चट्याङलार्य सबैभन्दा लामो दूरीको चट्याङको मान्यता दिएका छन् । यो चट्याङले ७०९ किलोमिटर दूरी तय गरेको थियो जुन दूरी लण्डनदेखि स्विजरल्याण्डसम्मको दूरीबराबर हुन्छ । उत्तरी अर्जेन्टिनामा ४ मार्च २०१९ मा चम्किएको चट्याङलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समयसम्म चम्किएको चट्याङको मान्यता दिइएको छ । यो १६.७३ सेकेण्डसम्म चम्किएको थियो ।
१०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीसम्म फैलिएका चट्याङलाई मेगाफ्ल्याश भनिन्छ । यसअघि सन् २००७ मा ३२१ किलोमिटर फैलिएको चट्याङ अमेरिकाको ओक्लाहोमामा देखिएको थियो जो यसअघि सबैभन्दा लामो दूरीको चट्याङको रुपमा रेकर्डमा थियो । २०१२ मा फ्रान्समा ७.७४ सेकेण्डसम्म चम्किएको चट्याङ यसअघि सबैभन्दा लामो समय चम्किएको चट्याङको रुपमा रेकर्डमा थियो ।